कतार विश्वकपमा सुराक्षाका लागि नेपाली सुरक्षाकर्मी परिचालन हुने यति धेरै तलब जान चाहनेले सम्पर्क गर्नुहोस् – Kavrepati
Home / समाचार / कतार विश्वकपमा सुराक्षाका लागि नेपाली सुरक्षाकर्मी परिचालन हुने यति धेरै तलब जान चाहनेले सम्पर्क गर्नुहोस्
कतार विश्वकपमा सुराक्षाका लागि नेपाली सुरक्षाकर्मी परिचालन हुने यति धेरै तलब जान चाहनेले सम्पर्क गर्नुहोस्
admin August 3, 2021	समाचार Leaveacomment 23 Views
कतारले सन् २०२२ मा आयोजना गर्ने विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताको सुरक्षाका लागि नेपाली सुरक्षाकर्मी प रि चालन गर्न कतार सरकार तयार भएको छ। नेपालका लागि कतारका राजदूत युसुफ बिन मोहम्मदले नेपालका गृहमन्त्री रामबहादुर थापासँग भेटेर सुरक्षा गार्डका रूपमा धेरै सङ्ख्यामा नेपाली लैजान कतार इच्छुक भएको र यसका लागि छुट्टै सम्झौता गर्न समेत कतार सरकार तयार रहेको बताएका थिए।
राजदूत मोहम्मदले नेपाल र कतारबीचको कु ट नी तिक सम्बन्ध ४० वर्ष पुगेको सो अवसरमा गृहमन्त्री थापालाई कतार भ्रमणका लागि निम्ता समेत गरेका छन्। खाडीमा रोजगार गुमेपछी नेपाल फर्किए चार लाख नेपाली – कुन देश बाट कती फर्किए सुची सहित्
को’रोना भाइरस महामारीका कारण रोजगारी गुमाएर साढे ४ लाख नेपाली श्रमिक स्वदेश फर्किएका छन् । १ वर्ष अवधिमा ६० देशबाट ४ लाख ५३ हजार ८४७ जना फर्किएका को’भिड–१९ संकट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्रको तथ्यांकले देखाएको छ । तर यी श्रमिकलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारले कुनै योजना ल्याएको छैन ।
केन्द्रका अनुसार सबभन्दा धेरै संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) बाट फर्किएका छन् । दोस्रोमा रोजगारी गुमाएर फर्किने मुलुकमा कतार पर्छ । यूएईबाट १ लाख ४० हजार २१६ र कतारबाट १ लाख ५ हजार ७७४ जना फर्किएका हुन् । मलेसियाबाट ४८ हजार ४३५, साउदी अरबबाट ४१ हजार ६६८, कुवेतबाट २३ हजार ३४१, भारतबाट ३६ हजार १९५, टर्कीबाट १३ हजार ६३४, जापानबाट १३ हजार ५२५ जना फर्किएका छन् ।
भारतबाट विभिन्न नाका हुँदै करीब ७ लाख नेपाली स्वदेश फर्किएको भनिए पनि यो तथ्यांकमा समेटिएको छैन । कोभि’डयता नियमित अवस्थामा कति कामदार फर्किए भन्ने यकिन तथ्यांक छैन । वैदेशिक रोजगार विभागले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किनेको तथ्यांक राख्ने पहल थाले पनि त्यो अझै प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
को’रो ना भा इर’सको दोस्रो लहरले वैदेशिक रोजगार प्रभावित भएको छ । पछिल्लो समयमा निशे’धाज्ञासहित हवाइ उडान समेत बन्द गरिएका छन् । नेपालमा दोस्रो लहर शुरू हुनुअघि वैदेशिक रोजगार सहज हुन थाले पनि पछिल्लो समयमा प्रभावित बन्न पुगेको छ ।
विभागका अनुसार को’भिड–१९ यता १ लाख श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । स्वदेशमा पर्याप्त रोजगारी सिर्जना नहुनु, वैदेशिक रोजगारमा जान नपाउनु तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किने क्रम बढेसँगै रोजगारीमा असन्तुलन पैदा भएको छ ।श्रमविज्ञ डा. गणेश गुरुङ सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्न ध्यान नदिएको बताउँछन् । को’भि ड पछि धेरै भारतीय श्रमिक पलायन भएकाले उनीहरूको ठाउँमा विदेशबाट फर्केकालाई अवसर दिन ढिलाइ गर्न नहुने डा. गुरुङको सुझाव छ।
‘विदेशमा जे काम गरेको छ, यहाँ पनि त्यही प्रकृतिको काम दिनुपर्छ,’ उनी भन्छन् । को’भिडको दोस्रो लहरले वैदेशिक रोजगार तहसनहस हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ ।वैदेशिक रोजगारीबाट ८ खर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिरहेको छ । यसले कूल गा र्ह स्थ उत्पादनमा २५ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान दिएको छ । केही वर्षअघि वैदेशिक रोजगारीले कुल गा र्ह स्थ उत्पादनमा २९ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटे पनि पछिल्लो समयमा खुम्चिँदै गएको छ । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।
Previous बिहेअघि स -म्पर्क भएको थाहा हुन्छ की हुँदैन ?
Next बलिउडका नवाब सैफ अली खानको भव्य महल, यस्कै लोभमा करिनाले गरिन् विवाह !